Okpomọkụ, Oké ọkọchị Nsogbu Uhie Ndagwurugwu Nduku Mkpụrụ, Na -arụpụta na Ogo, Nwepụta Mbelata nke okpokoro ngwaahịa - Potatoes News
Okpomọkụ, nkụda mmụọ na -emetụta nduku nduku ndagwurugwu Red River, na -ebute ịdị mma, mbelata mkpụrụ osisi
Agaghị ahụ oke nsogbu ihu igwe na -ekpo ọkụ na ndagwurugwu Red River 2021 ruo mgbe owuwe ihe ubi ga -amalite n'ime izu ole na ole, mana o doola anya na o metụtala mkpụrụ na mma.
Gary Secor, North Dakota State University pathology plant:
"Anyị nwere ọtụtụ nsogbu ahụike."
Secor bụ otu n'ime ọtụtụ ndị nyocha NDSU na Mahadum Minnesota kwuru okwu na Tọzdee, Ọgọst 26, na ụbọchị ubi ubi nke Northern Plains Potato Growers Association dị nso na Larimore, North Dakota.
Ka ọ dị ugbu a, oké ọkọchị ahụ ebelatala mkpụrụ nduku na -acha ọbara ọbara nke a na -eto maka ahịa ọhụrụ. Ndị na-akụ ma, nwee nchekwube, na mmiri ozuzo na -adịbeghị anya ga -atụkwasị ihe ọkụkụ ma mee ka igwu ala dị mfe. Ihe dị ka ndị ọrụ ugbo 200 gara ụkwụ mbụ nke njem ụbọchị nduku na Hoverson Farms dị nso na Larimore iji nụ ka ndị na -eme nchọpụta nduku na -enye ozi gbasara ihe ọkụkụ.
Mgbe ngosipụta nke ụtụtụ, njem ụbọchị ahụ kwagara na saịtị nyocha mmiri mmiri nke Northern Plains Potato Growers Association dị nso na Inkster, North Dakota, na mgbede, gaa Oberg Farms, na nso Hoople, North Dakota.
Ndagwurugwu Red River bụ onye kacha emepụta nduku uhie na United States, yana North Dakota na Minnesota jikọtara ọnụ bụ mpaghara nke atọ na -eto nduku na mba ahụ. Ndị ọrụ ugbo nduku na Northern Plains na -ewepụta ihe dịka 62% nduku maka nhazi eghe, 10% maka mkpụrụ, 12% maka chipping na 16% maka ahịa ọhụrụ, dị ka ndị otu Northern Plains Potato Growers Association si kwuo.
Ọnọdụ nduku North Dakota, nke gụnyere nhazi na ngwaahịa ọhụrụ, n'izu nke kwụsịrị na Sọnde, Ọgọst 23, bụ 8% dara ogbenye, 14% dara ogbenye na 63% dị mma, dịka National Statistics Statistics-North Dakota si kwuo. Agencylọ ọrụ ahụ gosipụtara naanị 13% nke ihe ọkụkụ dị mma, yana 2% mara mma.
Na Minnesota, ebe ewepụtara 20% nke poteto dị ka Ọgọst 23, 61% nke ihe ọkụkụ ka amapụtara nke ọma, National Agricultural Statistic Service-Minnesota kwuru. E wezụga ndagwurugwu Red River, a na -akụ nduku steeti na mpaghara Elk na Park Rapids nke Minnesota na nso Albert Lea.
Isi ihu ọkụ na ọnọdụ akọrọ n'oge uto nke 2021 bụ na ihe ọkụkụ nduku ndagwurugwu Red River fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrịa.
Dịka ọmụmaatụ, mbubreyo blight, ọrịa nduku nke na -emebi akwụkwọ na tubers, apụtaghị na ihe ọkụkụ n'afọ a. N'ime oge udu mmiri, ndị ọrụ ugbo ga -akpachara anya maka ileba anya n'ubi nduku ha ma tinye ọgwụ fungicides ma ọ bụrụ na ha achọpụta ọrịa na -egbu oge, ọrịa nke nwere ike ibute mfu na -emebi ihe.
Ọ bụ ezie na mpaghara ugwu ọwụwa anyanwụ North Dakota na mpaghara ugwu ọdịda anyanwụ Minnesota enwetawo mmiri ozuzo n'oge na -adịbeghị anya, mbubreyo blight agaghị abụ nsogbu n'ihi na enweghị ọgwụ mgbochi ọ bụla ịfụ. Agbanyeghị, nsogbu physiological bụ nsogbu nwere ike ịdị mma.
Okpomoku dị ọkụ n'oge oge na -eto eto ebutela nsogbu ndị a, nke gụnyere necrosis na -ekpo ọkụ n'ime obi na oghere obi.
Nsogbu ahụike abụọ ahụ anaghị emetụta nchekwa nke nduku, mana ndị na -azụ ahịa n'ozuzu anaghị amasị iri poteto nwere ntụpọ aja aja n'ime ime nduku, nke bụ njirimara nke necrosis okpomọkụ dị n'ime, ma ọ bụ poteto nwere ntụpọ ojii. , nke bụ akara nke oghere obi.
Ọdịdị na -adịghị mma nke ime poteto nwere ike ime ka mbelata ire ahịa ọzọ. Mmetụta na -amịpụta ejighị n'aka. Owuwe ihe ubi nke nduku ga -amalite n'ihe dị ka izu abụọ.
Ka ọ dị ugbu a, ihe ọkụkụ nke Hoverson Farms, nke nabatara n'ubi ubi Ugwu North Plains Potato Growers ụbọchị Tọzdee, mara mma, mana tubers dị n'okpuru osisi kwesịrị ịbawanye nha, Carl Hoverson kwuru, onye nwere ugbo ya na ụmụ ya nwoke, Mike na Casey.
N'okpuru mmiri mmiri, Hoverson Farms na -eto ihe dị ka hekta 5,400 nke nduku maka nhazi, chipping na ahịa ngwaahịa okpokoro. Ugbo Hoverson ga-amalite owuwe ihe ubi nduku na Septemba 10, ihu igwe na-enye ohere, na-enwe olile anya maka mkpụrụ nkezi nke akpa 475 narị paụnd kwa acre, Carl Hoverson kwuru.
Owuwe ihe ubi nke nduku na-acha ọbara ọbara, nke a na-eto maka ahịa ọhụrụ, ga-amalite n'etiti Septemba, Donavon Johnson, onye isi oche otu ndị na-akụ poteto na-eto poteto. Johnson na -eme atụmatụ na mkpụrụ nke nduku na -acha ọbara ọbara, nke ọtụtụ n'ime ha na -eto na -enweghị mmiri mmiri, ga -abụ nkezi. Ezigbo mkpụrụ nduku na -acha ọbara ọbara ga -abụ site na 325 ruo 375 narị, ka o kwuru.
Ntuziaka maka owuwe ihe ubi nduku
Ndị otu ndị na-agba ịnyịnya na-ejikọ aka na Tyrrells Bekee ejiri aka mee maka ụtọ ọhụrụ na-egbu egbu.
Atodị Egwuregwu Nduku na Europe: EuroBlight 2017 Nsonaazụ